iMobola Plum Fruit Imnandi
I-Mobola Plum Fruit Imnandi
iMobola Plum (Parinari curatellifolia) yaziwa njengomthi obetha umlozi (hissing tree), grysappel okanye bosappel, Mmola, Mbulwa, Mobola, Muvhula ne umkhuna. Imobola Plum ekhulayo isasazeke njenge nkowane, kwaye ziyabonakala xa zikhula endle kwelase – Swaziland, Zimbabwe, Mpumalanga nakwi phondo lase Limpopo, eMzantsi Afrika.
Lomthi unamagqabi Ambala mbini (umphantsi wegqabi usilivere-namhlophe) uvelisa isingqokelela yentyatyambo ezinuka kamnandi ezimile oko kwe trumpethi ukususela ngo July ukuya ku November. Iintyatyambo zivelisa incindi eninzi nentyatyambo ezityheli (pollen) eyenzelwa iinyosi, yiyo lonto ixhaphakile kumafama avelisa iinyosi.
Umthi omkhulu namagqabi wawo arhabaxa uvelisa iziqhamo ezimnandi ezingange plum, ngaphandle imthubi kwaye iyatyeka. Isiqhamo esivuthiweyo sityeka sikrwada, somisiwe, okanye siphekwe njenge papa, simfaxangelwe ukuvelisa isiselo okanye sivundiswe ibeyi bhiya (beer).
Lembewu ityebileyo yi oli iyatyiwa yodwa (ingathi zi almonds ngencasa), iyagutywa okanye isetyenziswe ukupheka isuphu okanye ixutywe nemifuno. I-oli evela kula mandongomane isetyenziselwa ukupheka. Imisebenzi ye mobola plum njenge yeza ziquka ukusebenzisa amaxolo namagqabi ukunyanga inyumoniya, isifo pho bhola yemehlo ijika ibemhlophe (cataracts) nendlebe ebuhlungu.
Amagqabi acoliweyo angasetyenziswa ukubekela amathamo ophukileyo okanye asuke esihlalweni kuquka noku philisa izilonda nokusikeka. Umthi we Mobola une silica (khemikhali) eyenza kubenzima ukusebenza ngayo xa ikhona, kodwa iyahlala xa isetyenziselwa ukulima iimayini, iipali, neenqanawe. Lomthi ukhetha umhlaba owomileyo onesanti (ne acidi) kwaye ayidibani nengqele nomoya.